Saamayn ku yeelanshada Iswiidhan | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Barashada bulshada / Buuga "Om Sverige" / Saamayn ku yeelanshada Iswiidhan
Tani waa qoraalo ka yimi buuga Ku saabsan Iswiidhan Waxaa​d​ soo dejisa​a cu​tubka 6
Meeshan baa waxa lagu sharixi sida nadaamka maamulka Iswiidhan yahay iyo Midoowga yurub. Adiga meeshan waxa ka akhrisankarta dimuqradiyada fikrad ahaan iyo ficil ahaan ba iyo mushtamaca aragti loo la qeybsado. Inta waxa xitaa ka heleysaa warbixin ku saabsan sida doorashooyinka loo suubiyo.
Barlamaanka Iswiidhan. Sawir: Melker Dahlstrand
Waa maxay demoqraddiyada? Horumarka demoqraddiyada Horumarka demoqraddiyada Iswiidhan Hab-dhiska demoqraddiyada Iswiidhan Distoorka Iswiidhan Xisbiyada iyo fikradaha siyaasadeed Hab-dhishka doorashada Iswiidhan Demoqraddiyada nolol-maalmeedka Waxaad soo dejisaa cutubka 6